Diesel jenareta, Gesi jenareta, Yanmar Series - Nyowani Hongfu
Warranty & Kuchengeta
Hongfu AJ-C akateedzana anotora iyo Cummins injini. Hongfu AJ-C yakatevedzana ine nekuvimbika kwakanyanya
Hongfu AJ-DE nhepfenyuro inotora iyo Dheuter injini. Emission standard-EU II, EUIII dzose dzakajairika dzakateerana pamusika dzakasiyana.
Hongfu AJ-Y inotevedza inotora Yanmar injini iyo yekutanga inotumirwa kubva kuJapan
Hongfu AJ-KB akateedzana anotora Kubota injini inova yekutanga kunze kwenyika kubva kuJapan.
yeruzivo mune ino ndima
Hongfu Simba yakazvipira kuve nyanzvi yepasirese mukupa magetsi nekushandisa kweinoshamisa matekinoroji, magadzirirwo akaisvonaka, sevhisi yepasirese nenzvimbo dzakasiyana dzevagovanisi pamusoro pemakondinendi mashanu nyika makumi matatu neshanu, izvo zvinoguma nekuvandudzwa kwesimba repasi rese magetsi. Hongfu Simba zvigadzirwa zvinosanganisira dhiziri jenareta seti, gasi jenareta seti, magetsi anoenderana michina Izvo zvese zvinoshandiswa zvakanyanya mukushandisa kwesimba remagetsi, zvivakwa, mafekitori, zvipatara uye indasitiri yemigodhi nezvimwe.
Tarisa Zvigadzirwa zvedu
Zvekubvunza nezvezvigadzirwa zvedu kana pricelist, ndapota siya kwatiri
Dzedu Dzakanyanya Nhau
Ndekupi kumwe kutsvagurudza uko vatengi vanotarisira kuona kubva kuCummins Turbo Technologies?
Iko kuenderera mberi kwekudyara mukutsvaga nekuvandudza madiziki turbo technologies kuri kuenderera uye kunoratidza kuzvipira kwaCummins kuendesa indasitiri inotungamira dhiziri mhinduro mumugwagwa-mugwagwa uye kure-mugwagwa mukuru. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Holset tekinoroji yekuvandudza, joina iyo ...
Ndechipi chiitiko icho maCummins ane rudzi urwu rwekutsvagira?
Cummins ane makore anopfuura makumi matanhatu ezviitiko ekukudziridza Holset turbocharger uye anoshandisa mukati meimba yekuongorora zvivakwa kuti aite yakasimba kuongororwa uye anodzokorora ongorora pane zvitsva zvigadzirwa uye matekinoroji. "Multi-phase Computational Fluid Dynamics (CFD) yakashandiswa kuratidza maitiro emafuta muchisimbiso ...
Ndezvipi zvimwe zvekutsvaga izvo vatengi zvavanotarisira kuona kubva kuCummins Turbo Techn ...
Kuenderera mberi kwekudyara mukutsvaga nekuvandudza dhiziri tur ...
Cummins ane makore anopfuura makumi matanhatu ekuziva achigadzira Holset turb ...
Matipi - Zvigadzirwa zvinopisa - Sitemap
Mitengo yeDhiriel Mutengo, Diki jenareta, Yakashandiswa Kutengesa Kwekutengesa, Mitengo Yejenareta, 240kw Generator, Diesel Jenareta neKubota Injini,
Kwete. 6 Jianye Road Tongxin Economic Development Zone Zhenghe County Nanping Guta Fujian Dunhu China
Kune Kune Zvigadzirwa Zvaunoda?
Zvinoenderana Nezvavanoda, Zvigadzirire Iwe, Uye Kukupa Iwe Nezvakawanda Zvinogadzirwa